खुसीको खबर !! सिपाहीलाई १६ बर्षमा पेन्सन दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/खुसीको खबर !! सिपाहीलाई १६ बर्षमा पेन्सन दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित
बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले पुस २९, माघ ५ र ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
पुस २७ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका ११ निर्णयमा ७ औं नम्बरमा सैनिक सेवा नियमावली पारित गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ।
यो सँगै अब नेपाली सेनाका सिपाहीले १६ बर्षमै पेन्सनमा जाने बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले संसोधित सैनिक नियमावली पारित गरेसँगै अब सो निर्णय स्वीकृतीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृती प्रदान गरेसँगै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि १६ बर्षे पेन्सन सेवा नेपाली सेनामा कार्यान्वयनमा आउने छ। यो सँगै सिपाहीलाई १६ बर्षमा पेन्सन दिलाउने प्रधानसेनापति थापाको सपना पनि पुरा भएको छ।
सैनिक सेवा नियमावलीको तेस्रो संशोधन २०७७मा नेपाली सेनाका सिपाही र फलोअर्सले सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमा पेन्सन पाउने उल्लेख छ। नयाँ नियमावली अनुसार ०६० साल वैशाख २८ गते र सोभन्दा पछि नेपाली सेनामा भर्ना भएकाका लागि यो संशोधन लागु हुने छ। संसोधित नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै तल्लो तहमा कार्यरत सिपाहीहरुलाई राहत मिलेको छ।
पेन्सनबारे हाल सेनामा मात्र नभई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि अवधि घटाउन माग हुँदै आएको छ। प्रधानसेनापति थापाले सिपाहीको गुनासो सुनुवाई गरेसँगै अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजिपीमाथि पनि सिपाहीको गुनासो सम्बोधनका लागि दबाब बढेको छ।
७० बर्षिय वृद्ध दम्पत्तिलाई बचाउने क्रममा १९ बर्षिय बिप्लब अधिकारीको मृत्‍यु
तिहारमा घर जानेलाई खुसीको खवर ! नयाँ बसपार्क र सामाखुसीमा मिल्नेछ यस्तो अवसर
दशैंमा साथीहरु मिलेर पोखरा घुम्न आए, एक जना मात्रै बाँचे, अरू सबै अस्ताए